Iindaba -Izibonelelo zesicelo sealuminium gasket
Izinto eziluncedo Isicelo Of ngefoyile ye-aluminiyam Gasket
I-aluminium foil gasket yenziwe ngealuminium emva kokucinezela emva koko yenziwa ngokweenjongo ezahlukeneyo. Ihlala isetyenziswa kwamanye amashishini okupakisha ukwahlula umoya kunye nokwandisa ubomi beshelufa beemveliso. Ke ziziphi izinto eziluncedo zefoyile ye-aluminium? ?
Okokuqala, i-aluminium foil gasket ayiyityhefu kwaye ayinancasa kweli phondo. Ukongeza, inesakhono esihle sokulwa neentsholongwane. Ngokubanzi, ii-microorganisms azinakukhula kuyo, ke umphezulu wayo ucocekile kunye nezinye izibonelelo, ke ihlala isetyenziswa ekutyeni. Kwiipakethe; Kwelinye icala, i-aluminium foil gasket nayo ayisebenzi, ke inefuthe elihle lokukhusela kwiimveliso ezibuthathaka elangeni; ayisiyiyo loo nto kuphela, ikwabaluleke kakhulu nasekuvulekeni kwayo ngokulula xa isetyenziselwa ukupakisha imveliso. Kwaye amandla ayo amancinci anokulungela kakhulu ukuba abathengi bavule; ke yinto ekumgangatho ophezulu yokupakisha edibanisa ubuhle, ukusebenziseka kunye nokusebenziseka lula.
I-aluminium foil gasket ayinetyhefu xa ishushu, kuba i-aluminium foil gasket yinto eshushu yokunyathela eqengqele ngqo kwiphepha elincinci nge-aluminium yentsimbi. Isiphumo sayo sokunyathela eshushu siyafana nesoyilo yesilivere esulungekileyo, ke oko kukwabizwa ngokuba yi-foil yesilivere yomgunyathi. Ngenxa yokuba i-aluminium ine-soft texture, i-ductility enhle, kunye ne-silver-white luster, ukuba iphepha eliqingqiweyo lifakwe kwiphepha le-offset kunye ne-sodium silicate kunye nezinye izinto zokwenza i-aluminium foil, inokuprintwa. Nangona kunjalo, ifoyile yealuminiyam ngokwayo kulula ukuyidibanisa kwaye umbala uba mnyama, kwaye umbala uya kuphela xa ukhuhliwe okanye uchukumisiwe, ngenxa yoko ayikulungelanga ukunyathela okushushu kumaqweqwe eencwadi kunye nakumaxesha agcinwa ixesha elide.
Ewe kunjalo, ayisiyiyo kuphela iingenelo ezibalaseleyo kwimveliso yokupakisha, kodwa inexabiso lesicelo esikhulu kwamanye amashishini.
Ixesha Post: Oct-31-2020